အွန်လိုင်းကနေ အစားအသောက်များ ရောင်းအားကောင်းလာ ရခြင်း လျှို့ဝှက်ချက်များ | yathar Magazine
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတစ်ဆင့်အစားအသောက်တွေမှာယူကြတာတွေက ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။
စားသုံးသူတွေက ဘာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေမှာရတာကိုအားသန်လာတာလဲ ?
အွန်လိုင်းကနေ အစားအသောက်တွေက ဘာကြောင့်ရောင်းအားကောင်းလာတာလဲ ?
အခုခေတ်မှာ အကုန်လုံးက အချိန်လုပြီးအလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချက်စားဖို့အတွက် အချိန်မရှိတာတွေ ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ အခုလိုရောဂါတွေပေါများနေတဲ့ကာလတွေမှာ Social Distancing အခြေအနေတွေကြောင့်လည်း ဆိုင်မှာထိုင်စားလို့မဖြစ်တဲ့အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူအွန်လိုင်းကပဲ မှာစားကြတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စားချင်ဖွယ်ရာပုံတွေ ကောင်းမွန်တဲ့ Review တွေကြောင့်လည်း ရောင်းအားတွေတိုးတက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို Customer Reviewကောင်းကောင်းလေးတွေကိုရလာတဲ့အခါမှာ မိမိတို့စားသောက်ဆိုင်ဘက်က ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်တဲ့ Delivery စနစ် ကောင်းမွန်တဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ ဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့က အထူးလိုအပ်လွန်းလှပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ယနေ့ခေတ်ရဲ့ Millennials တွေဟာ အွန်လိုင်းကနေ အစားအသောက်မှာယူမှုကို ပိုရွေးချယ်နှစ်သက်ကြပါတယ်။
ပြီးတော့ Digital ခေတ်မှာ အွန်လိုင်းအသုံးပြုများတာနဲ့ အမျှ နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ social media မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေကို ရှာဖွေရလွယ်ကူလာတာကလည်း ရောင်းအားကောင်းစေတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ လူသုံးများတဲ့ Facebook, Instagram, Twitter တွေမှာ စားသုံးသူတွေကို coupons, discounts စသဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ ကြော်ငြာလာတာတွေကလည်း အွန်လိုင်းကနေ အစားအသောက်တွေရောင်းအားကောင်းလာရခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။